Ugu Weyn Ee Amaranth
Xulashada noocyada ugu wanaagsan ee amaranth
Amaranth ayaa ka jirta Earth muddo ka badan 6000 sano. Waxaa la caabudi jiray wakhtiyadii hore by Incas iyo Aztecs, iyadoo la adeegsanayo xafladaha cibaadada. Yurub, waxaa laga keenaa 1653 Iswiidhan. Amaranth - warshad aan qabyo ahayn ee daryeelka, jecel yahay waraabinta iyo qorraxda. In flora adduunka waxaa jira in ka badan 60 noocyada noocyo kala duwan ee amaranth. Amaranth sida xayawaanka xayawaanka loo isticmaalo muddo dheer labadaba miisaaniyad warshadeed iyo quudinta xayawaanka guryaha.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Amaranth 2019